Apple dia te-hampitombo avo roa heny ny encryption an'ny iCloud | Avy amin'ny mac aho
Apple dia te-hampitombo avo roa heny ny encryption an'ny iCloud
Jesus Arjona Montalvo | | About us, tsaho, maro
Apple dia miasa manamafy ny famindrana iCloud teo afovoan'ny adiny niaraka taminy FBI. Raha izany dia manana ny angon-drakitra avy amin'ny backups amin'ny iCloud ny orinasa Cupertino, ary afaka mandefa izany amin'ny tranga toa ny iPhone 5C ampiasain'ny Mpampihorohoro San Bernardino, fa izao te hanova izany ianao.
Araka ny tatitra nataon'ny 'The Wall Street Journal', Apple dia te hanao mafy ny encryption iCloud na izy ireo aza tsy afaka mamaky, sahala amin'ny enkripsi ampiasaina hiarovana ny angona voatahiry eo an-toerana amin'ny fitaovana iOS.
Na izany aza, ny Mpitantana Apple sahirana amin'ny fomba hanamafisana ny enkripsi iCloud ary tsy manelingelina ny mpampiasamanampy ny tatitra. Apple dia mirehareha amin'ny famoronana rindrambaiko mora ampiasaina sy mora ampiasaina, ary ny sasany amin'ny Apple dia miahy ny manampy fahasarotana.
Ny fatiantoka an'ity encryption azo antoka kokoa ity dia raha manadino ny tenimiafin'izy ireo ny mpampiasa afaka namoy ny angona rehetra izy ireo nanohana ny iCloud izy ireo, ary tsy afaka namonjy azy ireo i Apple. Izany no antony tsy ahafahan'ny Apple miditra amin'ny angona iPhone ampiasain'i Syed Farook raha tsy misy ny passcode.
Ny encryption dia miantoka izany mpampiasa iPhone irery no afaka miditra ao. Raha diso be loatra ny fampidirana ny kaody passcode dia mety hidina mihidy ny fitaovana, ary tsy misy na inona na inona intsony ny FBI. Ny fomba tokana hidirana dia amin'ny alàlan'ny varavarana ambadika izay hisorohana ireo fepetra fiarovana ireo. Ary araka ny fantatsika rehetra fa tsy te hamorona ity varavarana aoriana ity i Apple noho ny antony mazava.
Vokatr'ireo ahiahy ireo dia tsy azo antoka ny hetsika fampiharana an'io karazana encoding io, hoy ny 'The Wall Street Journal'. Ary ny hetsika rehetra ataon'i Apple hanamafisana ny encryption dia mandeha ihany "Antagonize even more" mpampihatra lalàna, izay efa mifanohitra amin'ny toeran'i Apple.
Backups an'ny iCloud mirona amin'ny fampidirana kopian'ny saika rehetra angona manan-danja izay notehirizinao tao amin'ny fitaovan'ny iOS anao, ao anatin'izany ny fikirana sy ny safidinao, ny teny miafina toy ny tamba-jotra Wi-Fi, ny sarinao sy ny horonan-tsary, ny lisitry ny fifandraisana, ny iMessages, ary ny angona momba ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia te-hampitombo avo roa heny ny encryption an'ny iCloud
Tony Torres dia hoy izy:
Valiny tamin'i Tony Torres
Fa raha tsy misy fidirana amin'ny fiarovana ankehitriny,
Ity no mety ho fakantsary amin'ilay iPhone 7 Pro honohono
Ahoana ny fanovana ny fisehoan'ny Terminal amin'ny OS X